Ku Saabsan Baxnaano – BAXNAANO
Ku Saabsan Baxnaano
BAXNAANO > Ku Saabsan Baxnaano
Wasaardda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada waa hay’ada ugu muhiimsan ee dawladda ugana mas’uul ah abuuridda nidaam shaqooyin badan loogu abuurayo bulshada, sare u qaadida bulsho wada-socota iyo horumarinta nidaamyo deggan ee ammaan bulshadeed. Iyadoo haddaba gudanaysa waajibaadkan, ayey Wasaaraddu samaysay Siyaasadda Ilaalinta Bulshada, taasoo ay Golaha Wasiiradu ansixiyeen Sebteember 2019. Siyaasaddani waxay wax ku biirinaysaa Tubta Arrimaha Bulshada iyo Qorshaha Qaran ee 9aad (2020-2024). Ilaalinta Bulshadu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah istiraatijiyadda Dawladda Federaalka Soomaaliya kula dagaalamayso saboolnimada isla markaana sare ugu qaadayso adkaysiga bulshada. Arrintani waxay ku xusan tahay Dastuurka KMG ee Soomaaliya (2012), kaasoo sheegaya xuquuqaha qof kasta u leeyahay helitaan xuquuq dhaqaale iyo bulsho, ay ku jirto Ilaalinta guud ahaan Bulshada iyo gaar ahaan dadka aadka u nugul.
Siyaasadda Ilaalinta Bulshada waxay ku jihaysan tahay aragti waqti-fog, ee ilaa 20 sano. Marka la gaaro sannadka 2040, Soomaaliya waxay ahaan doontaa mid leh nidaam sugan ee ilaalinta bulshada taasoo bixinaysa caawinaad la sii odorosay ee nolosha qaybaheeda kale duwan, iyadoo saamaynaysa dhammaan bulshada Soomaaliyeed lana beegsanayo dadka ugu nugul.
Heerka nuglaanta ee Soomaaliya waa mid dhinacyo badan taabanaysa iyadoo qoysaska saboolka ah ay yihiin kuwa xaalkoodu ka durugsan yahay faqrinimo lacageed, sida heerka wax akhris-qoris iyo waxbarasho aasaasi ah, ka qaybqaadasho cududa shaqada, helitaanka hooy tayo leh, biyo iyo saxo wanaagsan. Tusaale ahaan, qiyaastii kala bar bulshada Soomaaliyeed ma haystaan cunto ku filan, taasoo muujinaysa heerka aadka u daran ee noloshooda. Intaa waxaa dheer, tobankii qofba toddoba ka mid ah waxay kasii hooseeyaan khadka saboolnimada, iyadoo inta hartayna tobankiiba mid ka mid ah uu aad ugu nugul yahay inuu ka hoosmaro khadka saboolnimada markii ay dhacaan arrimo masiibooyin deg deg ah. Xaaladdan iyadoo laga duulayo ayaa Mashruucan – BAXNAANO (Shock Responsive Safety Net for Human Capital Project (SNHCP) la doonayaa in uu shacabka ka gudbiyo buundada mucaawinada kaliya ku jihaysan, iyadoo wax laga qabanayo arrimaha cunno-yarida iyo nafaqada ee Soomaaliya.
Ujeeddada mashruucani waa mid lacag loogu wareejinayo qoysaska saboolka ah ee haysta carruurta da’doodu ka yar tahay shanta (5) Sano ee la ildaran nafaqo xumo ama aad nugul si loogu dhisayo nidaamka lagu baxnaaninayo bulshada masiibooyinka deg deg ah ku yimaadaan. Sidoo kale, iyadoo la eegayo waqtiga fog, wuxuu Baxnaano ka taageerayaa Dawladda Federaalka Soomaaliya xoojinta adkaysiga hay’adeeda si loo sameeyo qaabab aasaasi ah oo bulshada loogu adeegayo. Mashruucu wuxuu wejiga koowaad caawinayaa 200,000 qoysas sabool ah oo nugul (qiyaastiina ah 1.2 milyan oo qof) ee guud ahaan dalka Soomaaliya.
Arrinta ugu muhiimsan ee hirgalinta nidaamka Ilaalinta Bulshada waa in la helo Diiwaan Bulsho Midaysan. Hay’ado caalami iyo waddaniba leh oo ku hawlan arrimaha bani’aadanimada ayaa si gooni gooni ah u kala haya xogta dadka ay caawiyaan. Hase yeeshee, xogahani ma midaysna taasina waxay keenaysaa walaac ku saabsan waxtarnimada iyo in la caawiyo dadka u qalma.
Haddaba, BAXNAANO waxay samaynaysaa diiwaan bulsho ay maamusho Dawladda Federaalka Soomaaliya kaasoo keenaya in si midaysan hal meel loogu hayo macluumaadka dadka la caawinayo ee dhammaan mashaariicda socota taas oo sahlaysa isu-duwidda iyo waxtarnimada mashaariicda. In la hayo diiwaan bulsho ee qaran waxay mustaqbalka sahlaysa in si fudud loogu gurmado dadka ay masiibooyinku saameeyaan, halkaasna ay kalsoonidii lagu qabay dawladnimada soo xoogaysato, isla markaana dawladdu si hufan ugu adeegto muwaadiniinteeda.